Koloiko sy Hajaiko ny Teniko | Fifaninanana Tononkalo Fitiavan-tanindrazana 2016
Fifaninanana tononkalo fitiavan-tanindrazana 2016
Andinindininy momba ilay fifaninanana tononkalo ho fankalazana ny fankalazana ny fahatsirarovana ny tolo-panafahana 29 Martsa 1947.
Indro omena anareo eto ambany eto ny vokatra ofisialy tamin'ilay fifaninanana tononkalo fitavan-tanindrazana ho fankalazana ny andron'ny 29 Martsa 2016. Hitantsika eo ny anaran'ny mpanoratra, lohatenin'ny tononkalo, ary ny isa azon'ilay tononkalo.
1 - Io Taniko Io nosoratan'i Soamiely Andriamananjara (isa 47)
2 - Tiako Loatra Ianao Ry Taniko nosoratan'i Hanitra Rakotoarivelo (isa 45)
3 - Fitiavan-tanindrazana nosoratan'i Dafy Noely (isa 44)
4 - 29 Martsa nosoratan'i Barry Sirjon (isa 42)
5 - Ilo Tenako nosoratan'i Botsaiky Vkn (isa 41)
I Mainty no nitsara ny tsipelina. Johana sy Benja kosa no nitsara ny ambiny (hatsaran'ny tononkalo, firafiny, sns.) manaraka ireo fitsipika mifehy ny fifaninanana. Azonareo jerena ao amin'ny pejin'ny vondrona Koloiko sy Hajaiko ny Teniko ao amin'ny Facebook ny antsipirihan'ireo fitsipika ireo.
- Tsisy loka nozaraina tamin'ity fifaninanana ity. Fanahy iniana natao izany mba hahitana hoe iza marina ireo olona izay entanin'ny fitiavana ny teny sy ny kolontsaina malagasy ka vonona foana ny handray anjara amin'ny hetsika toy itony na dia efa mahafantatra aza fa tsy hisy loka omena azy. Koa dia fisaorana lehibe no atolotra azy dimy mianadahy nandray anjara tamin-kitsi-po tokoa.
- Tsy arakaraky ny maha-fifaninanana tsy misy loka azy anefa saria hita tokoa fa samy kanto dia kanto daholo ireo tononkalo ary tena nanahirana ny nitsara azy. Hita fa tena sangan'asa voakaly tsara avokoa ireo natolotra na teo amin'ny firafiny izany, na hakantony, na tsipelina, sns. Koa dia deraina avokoa ireo mpifaninana rehetra. Maromaroa ny toy izao.
- Nisy ihany anefa mari-pahatsiarovana nomena ireo nahazo ny laharana telo voalohany, izay natolotry ny Western Union. Araky ny mahazatra koa dia nomena diplaoma izy ireo ho fahatsiarovan ny nandraisany anjara tamin'ny fifaninanana.
Isaorana eram-po eran-tsaina ireto olona manaraka ireto izay nandray anjara tamin'ny fanantontosana iny fifaninanana iny:
- ny Western Union nanome ireo mari-pahatsiarovana,
Izay indray izany no vita tamin'ity fifaninanana ity. Amin'ny manaraka indray manao tsaratsara kokoa. Arahabaina manokana izy telo dahy nahazo ny laharana telo voalohany dia i Soamiely Andriamananjara, Hanitra Rakotoarivelo, ary i Dafy Noely.
Soamiely Andriamananjara, nahazo ny loka voalohany tamin'ny fifaninanana tononkalo fitiavan-tanindrazana 2016.
Naka ny sary: Soamiely Andriamananjara.